महानवमीः पालुङमा मनाइयो कोतमौला पुजा
मकवानपुरको थाहानगर स्थित पालुङमा विधिपूर्वक कोतमौला पु्जा गरिएको छ । दशैको अवसरमा ऐतिहाँसिक शहर पालुङ मनाइने कोतमौला पर्व महानवमीको दिन १३ असोजमा मनाइएको हो । थाहा नगरपालिका वडा नम्बर २ मा पर्ने पालुङमा यो पर्व वर्षेनी मनाइन्छ ।
पालुङमा दशै घर, कोतमौला, फुलपाती चौरलगायतको ऐतिहासिक स्थलहरु रहेको छ ।
पहिले पहिले प्रधानपञ्चको संयोजकत्वमा मनाउने परम्परा रहेको भएपनि अहिले स्थानीयहरुले संयोजन गरेर यो पर्व मनाइरहेका छन् । महानवमीको अवसरमा भएको कार्यक्रममा थाहा नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष गुप्त बहादुर कार्की तथा पदाअधिकारीहरुको पनि उपस्थिती रहेको थियो ।
कोतमौलामा महानवमीको अवसरमा बोका, राँगालगायतको बली दिने परम्परा रहेको स्थानीय निरोज प्रधानले जानकारी दिए । महानवमीको अवसरमा कोत मौलामा पुजा गरेपछि मात्र स्थानीयहरुले आ–आफ्ना घरका मेशिनरी औजार, कुटो कोदालो, हसियाँ तथा अरु हतियारहरु पुजा गर्ने परम्परा छ । कोतमौलामा बली दिइएको बोका तथा राँगाको मासु प्रसादको रुपमा राखने परम्परा पनि रहेको छ ।
धार्मिक तथा साँस्कृतिक दृष्टिकोणले धनी पालुङको दशै घरमा हवन सहित महाअष्टमीको अवसरमा कालत्ररात्री गरिएको छ भने विजया दशमीको दिन टीका लगाउने परम्परा रहेको छ ।
पालुङको दशै घरमा घटस्थापनादेखि विजया दशमीसम्म स्थानीय नापित, मगर, भुजेल, अर्याल, ढकाल तथा नेवारी समुदायको संलग्नतामा पुजाआजा गर्ने परम्परा छ ।
लागु औषध सहित हेटौँडाबाट दुईजना पक्राउ
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ‘राईड टु मार्खु’
जनप्रतिनीधिज्यू, सम्पत्ती विवरण बुझाउनू पर्दैन ?
त्रिभूवन राजपथ चार घण्टादेखी अवरुद्ध
कम्बल बाँडेको प्रमाण भेटिए बामगठबन्धन कारबाही भोग्न तयार !
दाताको हतारले चामल बितरणमा विवाद
थाहानगरमा एकहप्ते निःशुल्क दन्त शिविर हुने
थाहानगरमा बाल अधिकार सम्बन्धी दुईदिने अभिमुखकिरण शुरु
मकवानपुर प्रहरीद्वारा ठुलो परिणाममा हातहतियार र बिष्फोटक पदार्थ बरामद
स्थानीय तहलाई घुमाउरो पत्र, डेढ महिना सामाजिक परिचालकको जागिर थप हुने
अन्धाधुन्ध खुकुरी प्रहार गर्दा ३ जनाको ज्यान गयो ः यसरी भयो घटना
मकवानपुरमा खुकुरी प्रहार गरी तीनजनाको हत्या [नामावली सहित]
आगामी संसदमा पाँच वटा पार्टीको मात्रै प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । अघिल्लो संसदमा तीन दर्जन पार्टीहरु थिए । प्रदेश र प्रतिनिसभा निर्वाचनमा तीन प्रतिशत...
प्रदेशमा मन्त्रालयको नाम बेग्लाबेग्लै, केन्द्रमा १५ मन्त्रालय (सूचीसहित)
अब बन्ने नयाँ सरकारमा १५ वटामात्रै मन्त्रालयहरु रहने भएका छन् । संविधानअनुसार सरकारमा २५ मन्त्रीहरु रहन पाउने भएता पनि मन्त्रालयको संख्याचाहिँ १५...
भिमफेदीमा फिक्स भएको विवाह यसरी रोकियो
मकवानपुरमा एक बालिकाको विवाह हुने भनी तय भैसकेको अवस्थामा विवाह रोकिएको छ । भिमफेदी गाउँपालिकाकी १५ वर्षिय एक बालिका र २४ वर्षीय एक युवकको यही मंसिर...
लागु औषध सहित हेटौँडाबाट दुईजनालाई पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले शंकास्पद रुपमा हिडिरहेको अवस्थामा लागु औषध नाईट्रोभेट ३३...
आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले मकवानपुरमा ६० जनाले साइक्लिङ गर्ने भएकाछन् । मकवानपुरका ४० जना र अन्य जिल्लाका २० जनाले साइक्लिङ गर्ने...